मोडर्न टेक्नोलोजि र प्रभावकारी ईसिय गतिविधिलाई प्राक्सिसले जोड दिन्छः प्रिन्सिपल लामा | KTM Khabar
मोडर्न टेक्नोलोजि र प्रभावकारी ईसिय गतिविधिलाई प्राक्सिसले जोड दिन्छः प्रिन्सिपल लामा
२०७४ बैशाख ८ गते २०:२२ मा प्रकाशित
यसै सन्दर्भमा केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले चुच्चेपाटीमा रहेको प्राक्सिस इन्टरनेशनल एकेडेमीका फाउण्डर/प्रिन्सिपल गेन्द्र लामासंग विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसंगै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको पहुँचमा पुग्नका लागि प्राक्सिसले आफ्नो गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाईरहेको छ ?
विशेषत प्राक्सिसले नयाँ शैक्षिक सत्र–२०७४ का लागि नयाँ भर्ना लिईरहेको छ र त्यसमा जनचेतना जगाउँने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ ।
प्राक्सिसको हकमा २०७३ सालको शैक्षिक सत्र कस्तो रह्यो ?
समग्रतामा भन्नु पर्दा २०७३ साल प्राक्सिसको लागि अत्यन्त उल्लेखनीय र सफल रह्यो भन्नु पर्छ । हामीले जति पनि क्यालेन्डरमा मेन्सन गरेका थियौ । त्यी सबै प्रोगामहरु एक दम सफतापुर्व सम्पन्न गर्न हामी सफल भयौ । त्योसंग–संगैे ईसिय क्रियाकलापहरु इफेक्टिभली सफतापुर्वक सम्पन्न भएको छ । सिसिए प्रोगामहरु सम्पन्न भईसकेको छ । वार्षिक परिक्षाको रिजल्ट दिई सकेका छौँ । त्यसमा पनि राम्रो रिजल्ट आईसकेको छ । जसको कारणले गर्दा हामीले जति टार्गेट प्वाइन्टहरु गरेका थियौ, हाम्रो प्लानमा जति मेन्सन थियो त्यी सबै कुराहरु एकदम राम्रोसंग सफल भएको छ । यस अर्थमा २०७३ प्राक्सिसका लागि एउटा सुखद पक्ष रहेको जस्तो मलाई अनुभुति भईरहेको छ ।
प्राक्सिस कस्तो स्कुल हो ?, कस्ता विद्यार्थीहरुलाई समेट्दै छ ?, कहिले स्थापना भयो ?
प्राक्सिस वि.स.२०५३ सालमा स्थापित एउटा इन्सिच्युसन संस्था हो र यसको लामो इतिहास भएता पनि हामीले यो चलाएको करिब–करिब १२ वर्षमा प्रवेश गर्दै छौँ । हामीले हाम्रो आफ्नो म्यानेजमेन्ट चलाएको र यो १२ वर्षको अवधिमा विभिन्न किसिमका आरोह–अवरोह अवश्य पनि छन् । त्यसमा हिजोका दिनहरुमा जुन प्वाइन्टमा थियौँ र त्योबाट विस्तारै–विस्तारै ग्रयाजुल्ली अगाडी बढ्दै यो स्थानसम्म आईपुगेका छौँ । विशेषत प्राक्सिसले कस्ता किसिमका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई समेट्छ त ? भन्ने सवालमा मैले जानकारी गराउँनु पर्दा वास्तबमा सबै तह, तप्का र विशेष गरी सबै वर्गका अभिभाबहरुलाई समेट्ने किसिमको यो विद्यालय हो ।
राज्यको संविधानमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुराहरुलाई हरेक व्यक्तिहरुको नैसर्गिक अधिकार हो भनिसकेको छ । यस अर्थमा शिक्षाका लागि राज्यले गर्नु पर्ने ठाउँमा राज्यको उपस्थिति अलिकती कमजोर भएको कारणले गर्दा निजि विद्यालयहरु अगाडी बढ्नु पर्ने बाध्यात्म स्थिति छ । त्यस अर्थमा प्राक्सिसले पनि सबै वर्गका विशेष गरी अब पैसावाला अभिभावकहरुले मात्र प्राक्सिसमा पढाउँन पाउँने हैन । जो जेहेन्दार छ, जो गरिब छ, जो आफु पढ्न इच्छुक छ तर पनि उसले शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई केहि छात्रबृद्धिको व्यबस्था गरेका छौँ । जसको कारणले गर्दा त्यी वर्गका अभिभावकहरुले पनि आफ्ना बाल–बच्चालाई पढाउँन सक्नु हुन्छ । यस अर्थमा सबै तह–तप्का र वर्गका अभिभावकका बच्चाहरु पढ्न पाउँने एउटा यो शैक्षिक थलो हो ।
स्कुलको टिमको कुराकानी गरौँ सर, जसको नेतृत्व यहाँले दिईरहनु भएको छ । यो मानेमा प्राक्सिसको हकमा कस्ता शिक्षक, शिक्षिकाहरु हनुहुन्छ ?, अन्य कर्मचारी तथा यहाँको वातावरणीय प्रभाव कस्तो छ ?
यहाँको अत्यन्त जुझारु टिम छ । विशेष गरी हामी म्यानेजमेन्टमा रहेका टिम पनि एकेडेमीसियन हुनुहुन्छ । कत्तिपय संस्थागत विद्यालयहरुमा लगानीकर्ताहरु चाहीँ पैसावाल हुनुहुन्छ र लगानी गरेका हुनुहुन्छ तर उहाँहरु एकेडेमीसियन हुदैनन् । जसको कारणले गर्दा खेरी उहाँहरु अलिकती मनी माइन्डेड भएर कमर्सियललाईज हुन्छन् । हाम्रो प्राक्सिसको हकमा जो इन्भेस्टर साथीहरु हुनुहुन्छ एकदम फुल्ली एकेडेमीसियन हुनुहुन्छ । उहाँहरु एकेडेमी क्षेत्रका हुनुहुन्छ । जसको कारणले गर्दा काम गर्न सहज वाताबरण निर्माण भएको छ ।
टिचिङ फ्याकेल्टिको सवालमा कुरा गर्नु पर्दा खेरी यहाँको टिचरहरु सबै क्वालिफाइ छन । अनुभवि हुनुहुन्छ । २ वर्ष भन्दा कम काम गरेका कुनै पनि टिचरहरु हुनुहुन्न । जसले गर्दा सबै विद्यार्थीको अवस्थालाई बुझेर टिचिङ्ग गर्न सहज वाताबरण छ ।
भौतिक पुर्वाधारको सवालमा जति पनि विद्यार्थी भाई–बहिनीहरुलाई चाहिने, दिन सक्ने, भएका भौतिक पुर्वाधारहरु एथेष्टा मात्रामा चाहीँ यहाँ खेलकुदको खेल मैदान देखि अन्य सबै सेवा सुविधाहरु हामीले सहि तरिकाले दिन सकिरहेका छौँ ।
प्राक्सिसमा अध्यन गरिसके पछि विद्यार्थीले के पाउँछन ?
प्राक्सिसमा पढि सके पछि यहाँबाट पाउँने भनेको एक नम्वरमा क्वालिटि एजुकेशन हो । त्यसमा दुईमत नै छैन । यहाँको अभिभावहरुले बिश्वास गर्नुको एक मात्र कारण हो प्राक्सिसको गुणस्तरिय शिक्षा । त्योसंग–संगै ए लेभलका विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने जति पनि ईसिय गतिविधिहरु छन् । त्यी सबै गतिविधिहरु प्राक्सिसले उपलब्ध गराईरहेको छ ।
गेन्द्र लामासंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानीका लागि युटुब लिंकमा जानुहोसः
हेर्नुहोस वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जित्न सफल विश्वका उत्कृष्ट १५ तस्विरहरु
वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड फोटो पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा प्रतिष्ठित अवार्ड हो। अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालीले जित्न नसकेको यो अ ...
यस्तो रह्यो ज्ञान चक्षुको ‘स्कुल मेला’ (भिडियो)
काठमाडौँ । बासबारी, भेटघाट चोकमा रहेको ज्ञान चक्षु इंग्लिस हाई स्कुलले यहि चैत्र २४ गते शनिबार ‘स्कुल मेला’ सम्प ...
ह्याप्पी किड्सको छैटौ अभिभावक दिवस तथा दिक्षान्त समारोह सम्पन्न (भिडियो)
काठमाडौँ । मण्डिखाटारफाट, एकताबस्तिमा रहेको ह्याप्पी किड्स मण्टेश्वरी होमले छैटौ अभिभावक दिवस तथा दिक्षान्त समारोह यहि चैत्र ...
शान्ति पाठशालाको अभिभावक दिवस तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न (भिडियो)
काठमाडौँ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका गागलफेदिमा रहेको शान्ति पाठशालाले यहि चैत्र २४ गते शनिबार अभिभावक दिवस तथा विविध सांस् ...